Ipa GIMP iyo Kutaridzika kwe Photoshop | Kubva kuLinux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Applications, Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Imwe nguva yapfuura ndakakuratidza kuti sei ipa GIMP chimiro che Photoshop CS6, zvakadaro, kusakosha kuri kuita nzira iyi ndechekuti yakatipa iyo GIMP nerima. Rudzi urwu rwekugadzirisa kana tweaks, zviri nyore kubatsira mukufambisa uye kugadzirisa kwevashandisi ve Photoshop kumaturusi Open Source.
Via webupd8 Ini ndinoona nezve imwe nzira yekuzviita, ino nguva, ine yakajeka mavara; Uye kwete izvo chete, asi ikozvino tinogona kushandisa mapfupi ekhibhodi senge muFotohop uye mapaneru epadivi akaiswa nenzira yakafanana neiyo Adobe chishandiso. Uyu ndiwo mhedzisiro mune yangu KDE:
El Hack inouya kubva muruoko rwe +Martin Owens uye zviri nyore kwazvo kuishandisa nekuti izvo zvatinofanira kuita zvinomisikidza iyo GIMP yekumisikidza dhairekitori neimwe nyowani.
Nekushandisa uku kubiridzira isu tinorasikirwa nezvatinoda uye zvigadziriso zvatatsanangura muGIMP
1 Ipa GIMP kutaridzika kwe Photoshop
2 Dzosera shanduko
Ipa GIMP kutaridzika kwe Photoshop
Zvatinofanira kuita kuwana peji re Martin Owens paDeviantart uye dhawunorodha inotevera faira (iro randinosiya rakananga kubatana).
Dhawunirodha Photoshop Tweaks yeGIMP
Kamwe kwadzokororwa tinopfuurira kuita backup yeedu GIMP yekumisikidza dura mune yedu / imba.
Aya marongero akagadzirirwa GIMP 2.8, saka kana ukashandisa GIMP 2.9 (kana chero vhezheni mukuvandudza), hazvisi zvese zvinoshanda. Semuenzaniso, mapfupi ekhibhodi anogona kusashanda nemazvo uye pane dambudziko diki nemifananidzo.
Zvisinei, kana isu tichida kuzviita neshanduro yakakwira kupfuura 2.8, izvo zvatinofanirwa kuita ndezvi:
Iye zvino isu tinosunungura iyo faira rakadzvanywa mune yedu / imba, sezvo iine folda inonzi .gimp-2.8 uye ndizvozvo.
Kana isu tikashandisa yakakwira vhezheni yeGIMP, isu tinofanirwa kuteedzera iyo .gimp-2.8 dhairekita ku ~ / .config / GIMP / uye kuitazve iyo 2.9, ndokuti:
Mhedzisiro yacho inoshamisa chaizvo.
Kuti tidzokere isu tinongofanirwa kudzoreredza maforodha atakatsigira.
rm -r ~ / .gimp-2.8 mv ~ / .gimp-2.8-yekare ~ / .gimp-2.8
rm -r ~ / .config / GIMP / 2.9 mv ~ / .config / GIMP / 2.9-yekare ~ / .config / GIMP / 2.9
Uye ndizvozvo. Rangarira kuti mapfupi ekhibhodi anogona kuchinja pamwe nesarudzo uye nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Ipa GIMP kutaridzika kwePhotohop
Chokwadi ndechekuti zvinonyanya kukosha kuzviita pamakomputa evanhu vasina kujaira kuwanda-kuwanda kunyorera. Vanonyunyuta zvakanyanya nezve izvi paGIMP.
GIMP inoshandurwa kuita Imwe Window ine yakapusa menyu sarudzo kubvira vhezheni 2.8
Haisi chete nezve Windows Imwe chete, asi nezve ma icon uye marongero epaneru.
Ehe, ini ndinonzwisisa izvo kubva kune yako post elav, asi ini ndinopindura nekuti, ndichiverenga izvo zvinotaurwa naJorge-1987 uye ini ndinotora mazwi: «Ichokwadi ndechekuti zvinonyanya kukosha kuzviita muzvikwata zvevanhu vasina kujairwa kune akawanda-mawindo ekushandisa . Vanogunun'una zvakanyanya nezve izvi muGIMP. "Uye, sekuzvinzwisisa kwandinoita, anoti chiri kuvadzora ndiyo mawindo emawindo; kwete mutsauko mumifananidzo kana kurongeka kwemapaneli. Handizive kana ndikazvitsanangura. Izvo zvakangopindura kune zvakashandiswa nemushandisi chaizvo.
Ah hongu hongu .. ndanzwisisa 😛
Zvakanaka, nenzira iyoyo unodya nzvimbo kumativi ese echidzitiro, uchisiya maburi asina chinhu pazasi ... kunze kwekunge uine 28-inch screen ini handifunge kuti inoshanda chaizvo.
Iye zvino edza kubvisa dialog yemuvara kubva mubhokisi rematurusi (iwo mabhokisi maviri ane chikuru uye chechipiri ruvara) nenzira iyi unogona kudzikisa bhokisi rekushandisa kune imwechete mutsara wemifananidzo (diki) uye muWindows, unounza dialog yemavara kurudyi ikholamu pamwe nezvikamu uye nezvimwe.
Nekuita izvi iwe unochengetedza yakawanda nzvimbo pane yakasarudzika 21-inch Monitor.
Muenzaniso wekuti ndinayo sei: https://farm8.staticflickr.com/7364/16217560217_76e24b0546_c.jpg
Yakanaka kwazvo posvo 😉
Nenzira Elav, ini handizive kana zvichizongova ini chete, asi ini ndinoona chokwadi chekuti kudzvanya pamifananidzo hakuchinje saizi uye nekudaro iwo iwo ruzivo haukosheswe, ivo vanofanirwa kuita chimwe chinhu nezvazvo.
Iwe unoreva izvo mifananidzo mune iyo posvo?
Zvakanaka kana zvirizvo zvandatochinja saizi 😉
Ehe, iwo mamwe chete ... Zvino iwo ruzivo rwacho zviri nani kukosheswa. Kwakanaka !!
Mavara ari kuruboshwe kuruboshwe, pasi pechaunhonga ruvara, haugone kubviswa, handiti? Ini ndinofungidzira kuti iwe wabvisa icho kubva mukutora nekuchigadzirisa, nekuti pachinzvimbo pane mitsara diki mune yakareruka grey toni.
gadza iyo hover zoom yekuwedzera mubrowser yako, inokusevha iwe kana kubaya, inoshanda kune akawanda masayiti.
Ini ndinokusiira iwe yakateedzana icon icon theme mapake eGimp ayo andakaunganidza nguva yadarika.
Uye pachangu, pachinzvimbo chekushandisa Photoshop mifananidzo, ini ndaizoshandisa Zviratidzo zviratidzo. Iwo ari nani, akaenzana uye imwe nguva yapfuura ndakagadzirira nekugadzira mapakeji maviri, rimwe remwenje wedesktop madhisiki uye rimwe racho rerima tema.
Unogona kudhawunirodha kubva pano:
Ndatenda Jesuda !!! uye Kutenda kuna Desdelinux nezve zvese zvaunoita kuti zvikwanisike. Vhura Sosi Kwese Kwese Nharaunda !!! 🙂
Ndine GIMP 2.8.10 uye hazvishande kwandiri.
Bvisa iyo ~ / .gimp-2.8
Uye unzip iyo .gimp-2.8 dhairekita kubva kuZIP mu ~ /
Uye hazvina kundishandira, kunyangwe ndichidzima kumisikidzwa kwandaive nako. Chii chandiri kutadza?
PS: Ndiri paUbuntu 14.10
Haufanire kudzima iyo .gimp-2.8 dhairekitori, pachinzvimbo iwe unofanirwa kuteedzera madingindira mu .gimp-2.8 / theme / folda.
Pej: iyo yekufananidzira theme inofanira kunge iri mu:
.gimp-2.8 / madingindira / chiratidzo-gimp
kana ukabvisa iyo yose .gimp-2.8, unorasikirwa neese maGimp marongero awanga uine
Aya ndiwo maratidziro arinoita kuteedzera zvirimo mune zvinyorwa zvetimu ku /usr/share/gimp/2.0/themes/photoshopware
Pindura kune yekutanga uye yemahara Malagueños
Akapenya penya. SeCGArtist ini hapana chandinoita asi ndinoshuvira kutama (kusvika pazvinogoneka), kusunungura software, asi shanduko inova yakaoma zvakanyanya kana marongero uye ese acho achinja. Ini ndaida Krita chaizvo izvo.
Saizvozvowo, sekune Photoshop ... ndinoshamisika nezvekushandisa chaiko kwezvishandiso izvi kupfuura kukanganisa zvekare (nekuti isu tatova neLightroom kana Rima kuti ridzokorore). Kune zvandinoita nguva nenguva (2D textures), ndinosarudza Krita.
Diego redero akadaro
Ini pachangu handifarire masystem kana zvirongwa zvekutaridza sevamwe.
Pindura Diego Redero
Ndatenda zvikuru, ndanga ndichishandisa Gimp kwenguva yakareba, ndisina kuve nyanzvi pakushandisa kwayo, asi ndakakwanisa kuiisa mumabasa angu madiki, magirafu, izvozvi ndinogona kutapurira vamwe vangu kuti vatore danho rekutanga kuishandisa. Mufaro Buddy!
Akira kazama akadaro
Ndinoifarira, ndanga ndichishandisa iyi seti kwenguva yakareba, kunyange hazvo nechimwe chikonzero ichi ichiwedzera nguva inotora kuvhara GIMP, dzimwe nguva kunyangwe meseji inoonekwa ichiti chirongwa hachisi kupindura uye mumasekonzi mashoma gare gare anovhara.
Handizive kuti zvinongoitika kwandiri chete.
Pindura kuna Akira Kazama
Mhoroi Jesu, handifarire chero shanduko kana ndichitanga Gimp, zvinopesana, zvinoitika kwandiri zvakafanana newe, kuvhara musangano kana hwindo rekunyevera rekunyorera rikaonekwa kwechinguva risingapindure kukumbira kuvhara asi richizvivhara roga risingade kupindira kwangu sezvingave zvakajairwa.
Zvinonzwisisika, izvi zvinongoitwa pane yangu yekare laptop, kwete pane yangu yakati wandei komputa yedesktop, saka zvinogona kunge zvichikonzerwa nekushaikwa kwezviwanikwa ... chenjera! Handizive kuti imidziyo ipi yauinayo, ini ndinongotaura izvi zvichibva pane zvandakaona mushure mekuyedza mod pamakomputa angu maviri.
Chero mazano kubva kune mumwe munhu akafambira mberi?
Zvakaitika kwandiri zvakanyanya neangu yekare Athlon II X2 sezvazvino, neyangu yazvino FX 6300, chinoshamisira ndechekuti kekutanga nguva yandakatanga GIMP, yakavharwa zvakajairika pamakombuta ese ari maviri, zviri kubva pakutanga kwechipiri zvinotora nguva kuvhara.
Zvakanakisa, zvinonyanya kubatsira pandinoshanda, maita basa kwazvo.
Izvo zviripo, hazvisi zvekuti ini handidi dhizaini yeGIMP, ndezvekuti ini handifarire kuti kuchave nemakumi maviri akazvimirira matabhu
Chinhu chakashata pamusoro peGimp, ine XCF yakajairwa yekuwedzera, ...
Kubva kune aimbova Debian uye ArchLinux mushandisi, kwaziso kubva… FreeBSD Unix.
GIMP yemhando fomati ndeye XCF, iyo inobvumidza iwe kuchengetedza ese maficha emafaira ako, senge matete, nzira, nezvimwe ...
Kubudikidza nekutumira uye kupinza sarudzo iwe unogona kugadzirisa nekuchengetedza JPG, PNG kana GIF pakati pemafomati mazhinji.
Nenzira, kushandisa zvidimbu zviri nyore kwazvo kugadzira animated GIF kana kugadzira iyo PDF
Parizvino ndinofunga iwe unofanirwa kuramba uine ziso paKRITA. Handizive nei ndichiiwana iri nani kwazvo kupfuura gimp munzira dzese.
Pindura kuna BishopWolf
Unogona kutanga pano
uenderere mberi neizvi
enda iyopampam apa ingwe
Saiti iyi uye neayo magegen tricks. Ini ndinoda Gimp uye neiyo yakabatana hwindo ficha ini handidi kuti itaridzike semumwe munhu.
uye iyo windows vhezheni inoshandawo?
Iyi mod yakanaka ... inopa kutaridzika kunonakidza kuGimp.
Kutarisa madoko seizvi mumaonero angu kunoshanda, ndinoona yakafanana neiyo "hwindo rimwe chete" maitiro asi nekumwe kushanduka kushoma ... mifananidzo yeiyo «maturusi» dhoku mune grayscale inoipa kutaridzika, (ne mvumo yako yaJesu ndichaedza iyo Dpixel zvakare kune iyo barbar, nenzira iyo blog yako inoita senge inonakidza uye ndakaiwedzera kune vandinoda), zvinosuwisa kuti kune rimwe divi uye mumamenyu tinowana zvimiro zvakajairika zvinopesana nechimwe chinhu iyo mitsva mifananidzo inopihwa neiyi mod, kune rumwe rutivi, kuunza sarudzo yematurusi uye mabhurashi mumatebhu padoko rekumisikidza, pamwe nenhoroondo yemifananidzo uye yakavhurika mifananidzo pazasi, zvinoita kunge zvinobudirira uye zvakagadzikana.
Chero zvazvingaitika, vateveri vemawindows akapatsanuka vanogara vaine mukana wekutarisa iyo "single hwindo" maitiro mune "windows" menyu kuti urambe uchishanda zvakangoita seyaGimp yekutanga.
Ndakaiyedza pane yangu 10 ″ Hp mini uye chikamu chepazasi chinonyangarika zvekuti ini ndichiri nesarudzo yekugona kuramba ndichishanda mumawindo akapatsanurwa inokosheswa, pane zvinopesana pakombuta yangu yedesktop kwandinayo 17 ″ tarisa Iyi imwechete windows mod "photoshopped" rinotaridzika kunge rakakura: S ... hehehe, kungoenderana uye nekomendi kungave kwakanakira iyo panoramic skrini.
Ndichatarisa kuna Krita anoita kunge arikunaka, kunyangwe ari KDE, kuiisa muXubuntu handizive ... asi chokwadi ndechekuti ndakamutarisa webhusaiti uye handifunge. Ini ndinogona kuramba ... ndinofungidzira kuti kana akandimisikidza KDE maraibhurari anowedzera maapplication uye mamwe mapakeji andisingade uye anogara achindimisa kubva kuyedza kunyorera munzvimbo ino.
Ndinovimba kubatsira mumwe munhu nerudzi urwu rwekudzokorora randinopa nechinangwa chekuita yangu zvishoma kusvika padanho iro ruzivo rwangu runonditendera.
Kutenda kuna DesdeLinux nekupinda uku uye nekutenda kune vese vanotaura vanoita kuti zuva rega rega ridzidze zvishoma, vachiita mhedziso kubva pano neapo…. 🙂